Home News RW Kheyre oo waqti iyo qarash ku luminaya shir aan isaga loogu...
RW Kheyre oo waqti iyo qarash ku luminaya shir aan isaga loogu talagalin
RW Xassan Cali Kheyre ayaa mar kale safar aan loo meel dayin ku aadaya dalka Maraykankaa si uu uga qayb-galo shir ka dhacaya magaalada Washington DC. Kulankaan oo lagu soo bandhigayo cilmi baartis iyo warbixin ayaan ahayn mid loogu talagalay in Ra’isal Wasaare dal in uu ka soo qayb galo. Waxa ay ahayd in shirkaan loo diro wasiirka ay qusayso iyo hay’adaha loogu talagalay in ay kulankaa ka qayb galaan.
Iyada oo dalka uu ku jiro xaalad colaadeed oo kooxda argagaxisada ee Al Shabab ku bartilmaamaysanayso shacabka Soomaaliyeed iyo culayska dhaqaale iyo mid siyaasadeed ee haysta dowladda Soomaaliya ayaa Ra’isal Wasaare Kheyre waxa uu goostay in uu safar aan waxba ku soo kordhinaynin xaalada dalka ka jirta xiligaan uu ku tago dalka Maraykanka.
Sababta ugu wayn ee uu u tagayo kulanka Bangiga Aduunka waxa ay tahay in uu isku soo sawiro mas’uuliyiinta ka soo qayb galaysa kulankaas, danao isaga u gaar ahna uu ka sameeysto kulanka. Waxaa muuqata in uu doonayo inta uusan baarlamanaka furmid inuu isku tuso labada gole in uu yahay mas’uul caalamka laga aqoon san yahay. Waxaa taa ka sii xanuun badan qarash gacabn qabsi ah lagu lunsan doono safarkaas.